တစ်ညတည်းနဲ့တန်ပါတယ် – Grab Love Story
ခြံထဲကားဝင်လာသံကြားတော့ ဘုရားရှိခိုးနေတာ ကမန်ကတန်း ရပ်ပြီး ဘုရားခန်းထဲကထွက် လှေကားထိပ်ကနေ တိတ်တိတ်လေး သွားချောင်းကြည့်မိတယ်။ ဆင်ဝင်အောက်မှာတည်းက ပျင်းရိပျင်းတွဲ အသံနဲ့ စကားပြောလာတာဆိုတော့ မင်းစိုးမှန်း တန်းသိတယ်။ သူသိချင်တာက မင်းစိုးနဲ့ပါလာမယ့်သူ။ ခေါင်းကို ဒီထက်ပိုငုံ့မရတော့ လက်ရန်းမှာ ကိုယ်ကို ဒီထက်ပို ကိုင်းလိုက်တယ်။ ဖင်ကြီးနှစ်လုံးကတော့ တင်းနေတဲ့ ထမီသားအောက်က ပြူးပြီး ထွက်နေမှာပဲ။ တော်သေးတာပေါ့ အနောက်က ချောင်းတဲ့သူမရှိလို့။ သိချင်စိတ်က ရင်တွေတောင် တဒိတ်ဒိတ်ခုန်တယ်။ စကားပြောသံတွေကလည်း တဖြည်းဖြည်း နီးလာပြီ။ “ဟုတ်တယ်ဗျ ကိုမင်းစိုးရဲ့၊ အဓိကအချက်က ဦးစီးဦးဆောင်မယ့်သူ မရှိသေးတာ။ ကျနော်တို့ သမဂ္ဂလည်း ဒီကိစ္စကို သေချာကြိုးစားနေကြပါတယ်” အသံနုနုအေးအေးလေးကို ကြားလိုက်ရမှ ရင်ထဲက အပူလုံးကြီးကျပြီး ရင်တစ်ခုလုံး အေးမြစိမ့်ဆင်းသွားတယ်။ အမယ်လေး ဒီအသံလေးကြားရဖို့ကို ရင်ခုန်လိုက်ရတာ။ “တီလတ် ဘာချက်လဲ” ကျက်သရေရှိတဲ့ အသံလေးကို ဖီးလ်တက်လို့မှ မဆုံးခင် မင်းစိုးရဲ့ ကျက်သရေမရှိ အသံပြဲကြီးက နားထဲလာဆောင့်တယ်။ သေနာကောင်။ ချက်ချင်း ပြန်ဖြေလိုက်ရင် သူချောင်းနေမှန်း သိမှာစိုးလို့ ခနလေး စောင့်လိုက်ပြီးမှ “ဟဲ့ ဘယ်သူလဲ၊ မင်းစိုးလား” လှေကားက အသာလေး ဆင်းလိုက်ပြီး “တီလတ် ဘုရားရှိခိုးနေတာဟဲ့၊ မင်းတို့က အော်ကြီး ဟစ်ကျယ်နဲ့၊ ဟယ် သားဖိုးချစ် လည်း ပါလာတာကိုး၊ လာ..လာ..သား ထိုင်၊ မင်းစိုးနဲ့အတူ တခါတည်းစားသွား၊ ဒီနေ့ ပုစွန်တုပ်ချက်တာကွ” သူ့ကိုတွေ့တာနဲ့ အံ့ဩဟန်ပြုပြီး ထမင်းစားခေါ်လိုက်ပုံက အင်မတန်ပီပြင်တဲ့ ဝါရင့်မင်းသမီးအိုက်တင်ပဲ။
ဒေါ်ခိုင်ခိုင်လတ်ဟာ ဆရာဝန်မလုပ်ဘဲ မင်းသမီးလုပ်ခဲ့ဖို့ ကောင်းတာ။ “နေပါစေ တီလတ်၊ သားစားခဲ့ပြီးပါပြီ။ ခု ကိုမင်းစိုးကို စာရှင်းပြဖို့ လိုက်လာတာ၊ ပြီးရင် သွားစရာလေးလည်း ရှိသေးလို့၊ အဲဒါကြောင့်” အားနာပါးနာ အသံလွင်လွင်လေးကို ထပ်ကြားရပြန်တယ်။ သူက မင်းစိုးခေါ်သလို တီလတ်ပဲခေါ်တယ်။ ငယ်ငယ်တည်းက အိမ်ချင်းက ကပ်ရက်ကိုး။ ဘာကျွေးကျွေး အမြဲတမ်း ငြင်းနေကျ။ ဟင်းဟင်း။ ဒီက ခိုင်ခိုင်လတ် တကယ်ကျွေးမယ့်ဟာကျရင်တော့ မင်းငြင်းနိုင်မလား ကြည့်သေးတာပေါ့လေ။ “တီလတ် ဘာတွေသဘောကျပြီး ပြုံးနေတာလဲ။ သားမစားသေးဘူး။ ဖိုးချစ်နဲ့ စာလုပ်လိုက်ဦးမယ်၊ လာ ဖိုးချစ် ငါ့အခန်းထဲသွားမယ်။” ကြည်နူးနေတဲ့ အတွေးလေးကို မင်းစိုး အစုတ်ပလုတ် ဝင်နှောင့်ယှက်သွားတယ်။ နှောင့်ယှက်ရုံအားမရလို့ သူ့ကိုပါ လက်ကဆွဲပြီး ခေါ်ချသွားတာ ယက်ကန်ယက်ကန်လေးနဲ့ ပါသွားရှာတယ်။ သေနာကောင် မင်းစိုး။ ဒီနှစ်မှ ဘာစိတ်ကူးပေါက်ပြီး စာမေးပွဲ အသေအလဲ အောင်ချင်နေရလဲ မသိဘူး။ စာလုပ်မယ်ဆိုတာချည်းပဲ။ ဟုတ်တော့လည်း ဟုတ်တယ်။ ဒီကောင် 2nd MB မှာတင် တဖုန်းဖုန်းကျနေတာဆိုတော့ ကလေးတွေနဲ့ ကျောင်းပြန်တက်နေရတာ ရှက်မှာပေါ့။ ဒီကောင့်ကို တစ်ဦးတည်းသော တူလေးဆိုပြီး ကိုယ့်ခြေရာနင်းအောင် ဆေးကျောင်းတက်ခိုင်းကာမှ ပထမနှစ်မှာတင် ကဗျာလိုလို စာလိုလို ဂိမ်းလိုလို ရူးပြီး ဝေလေလေဖြစ်သွားတာပဲ။ အခု ချစ်လွန်းသူဆိုတဲ့ ဖိုးချစ်လေးနဲ့ ပေါင်းမိမှ စာတွေဘာတွေ ပြန်လုပ်လာတာ။ ဖိုးချစ်လေးက ဖရက်ရှာဆိုတော့ မင်းစိုးထက် ငယ်ပေမယ့် ပိုရင့်ကျက်တယ်၊ အနေအထိုင် သိမ်မွေ့တယ်။ နူးညံ့တယ်။ အို ပြောလို့ဖြင့် မကုန်ပါဘူး။ အဲဒါကြောင့်ပဲ ခိုင်ခိုင်လတ်က ဆွဲစားချင်နေတာပေါ့။ ခိုင်ခိုင်လတ်တို့ မိဘတွေက ဆုံးပါးသွားကြပြီ။ ရှိတာမှ ညီအစ်မနှစ်ယောက်တည်း။
အစ်မလုပ်သူတို့ လင်မယားကလည်း မင်းစိုးလေး တစ်တန်းလောက်မှာ သူ့ကို ထားခဲ့ကြပြန်ပြီ။ အဲဒီတုန်းက သူက ဆရာဝန်မပေါက်စပေါ့။ ခု မင်းစိုး အသက်တောင် ၂၂ လောက်ရှိနေပြီ။ သူကတော့ ၄၀စွန်းစွန်းလို့ပဲ ပြောထားပေမယ့် လူတွေက မဟုတ်နိုင်ပါဘူး မခိုင်လတ်ရယ် ရှိလှ ၃၅ပေါ့ဆိုတာချည်းပဲ။ ခိုင်ခိုင်လတ်တို့ အရွယ်တင်ပုံလေ။ အံမယ် ဆုံးသွားတဲ့ မင်းစိုးအမေ ခိုင်ခိုင်မြတ်က သူ့ထက်ပိုလှတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် အစ်မ မရှိတဲ့နောက် အစ်မက သူ့အလှတွေ အမွေပေးသွားသလားထင်ရတယ်။ ခိုင်ခိုင်လတ် တို့ အသားကုန်လှလာတယ်။ ဇာတိက ပေါင်မြို့သူဆိုတော့လည်း ကိုယ်လုံးကိုယ်ထည်လေးက ပေါင်သူပီပီသသ လုံးထွားပြည့်ဖြိုးနေတာပေါ့။ မွန်အမျိုးသမီးဆိုတော့ အသားအရေကလည်း ဝင်းဝါစိုပြေနေတာ၊ တကယ့် သုဝဏ္ဏဘူမိအနွယ် အစစ်ပဲ။ နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးနဲ့ သွားလေး နည်းနည်း ယောင်ယောင်လေး ရှေ့ထွက်နေတာ (ခေါတာမဟုတ်ဘူးနော်) လေးက ပိုစွဲဆောင်မှုရှိတယ်ထင်ရတယ်။ ညနေဘက် ဆေးခန်းများသွားထိုင်လိုက်ရင် တစ်ရပ်ကွက်လုံး မငေးတဲ့လူကို မရှိဘူး။ ဒါကြောင့် ခိုင်ခိုင်လတ်ကလည်း ကားကို ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာထားခဲ့ပြီး ရပ်ကွက်ထဲမှာ ပတ်ပြီးကို လျှောက်ပစ်တာ။ ဝတ်လိုက်ရင်တော့ ရင်ဖုံးနဲ့ ပိုး၊ချိတ် ထဘီတွေနဲ့ ဆံထုံးအုပ်အုပ်ကြီးနဲ့၊ အတွင်းထဲမှာ ရွချက်ကတော့ ခိုင်ခိုင်လတ်ကို မီတဲ့လူ ရှားသလောက်ပဲ။ ကျောင်းပထမနှစ်ကနေ ဒီအရွယ်ထိ ဘဲချည်းပဲ ငါးယောက်ထားဖူးတယ်။ အဲ့ထဲက သုံးယောက်နဲ့က ငြိဖူးတယ်။ ရိုင်းရိုင်းပြောရင် လိုးဖူးတယ်။ ပထမဆုံးတယောက်နဲ့တုန်းကတော့ သူရော ကိုယ်ရော ငယ်သေးလို့ ထားပါတော့။ တခါတလေမှ။ ဒုတိယတစ်ယောက်ကတော့ တကယ်အထန်လိုင်း။ အဲ့ချိန် ခိုင်ခိုင်လတ်ကလည်း ဆရာဝန်မပေါက်စ။ အားတဲအချိန်ကို အားသလိုကို လိုးတာ။
ခန္ဓာကိုယ်မှာ ရှိသမျှအပေါက်တွေလည်း သူ့လီးကြီး မထည့်ဖူးတာ မရှိသလောက်ပဲ။ ဖင်စအိုဝဆိုတာ လိုးလွန်းလို့ ရိုးတောင်ရိုးတယ်။ သူလိုးအားကြီးတာ မပြောနဲ့လေ။ ခိုင်ခိုင်လတ်ကလည်း ဖင်ခံပက်စက်တယ်။ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ရှိသမျှအပေါက် အကုန်အထည့်ခံချင်တာ။ နားရွက်တို့ နှာခေါင်းတို့တောင် လီးနဲ့ မဆံ့လို့ ဆံ့ရင် ထည့်ခိုင်းမှာ။ မဆံ့ဆို ဟိုလူ့လီးကလည်း တကယ်စံချိန်မီ လုံးတုတ်နေတာ။ လိုးဖူးတဲ့ ၃ယောက်ထဲမှာ အကြီးဆုံးပဲ။ တတိယတစ်ယောက်ကတော့ ပထမတစ်ယောက်လိုပါပဲ။ လူပျိုကြီးကို သွားကြိုက်မိတာ ရှက်သလို ကြောက်သလိုနဲ့ လိင်ကိစ္စလည်း အားကမရှိ။ လီးကလည်း သေး။ သူနဲ့တော့ သုံးလေးခါပဲ လိုးဖြစ်တယ်။ အဲ့တယောက်က နောက်ဆုံးလိုးဖူးတဲ့သူဖြစ်သလို နောက်ဆုံးထားတဲ့ ရည်းစားလည်းဖြစ်တယ်။ ဘာလို့ဆို အသက်တွေက မငယ်တော့ဘူး တည်ငြိမ်ရတော့မယ် ဘာညာနဲ့ ခိုင်ခိုင်လတ်တို့ ဂေါက်ပြီး ဖြတ်လိုက်တာပဲ။ အဲထိတော့ ဘာမှမဖြစ်သေးဘူး။ နှစ်နှစ်လောက် လီးနဲ့ကင်းဝေး ကျန်းမာရေး လုပ်နေလိုက်သေးတယ်။ နှစ်နှစ်လည်း ကျော်ရော ရောဂါထတော့ပဲ။ အဲ့ဖိုးချစ်လေးကို မြင်ပြီးတော့လေ။ ကောင်လေးက အရင်ကလည်း အိမ်ကို ဝင်ထွက်နေကျပါ။ အဲ့တုန်းက ဖာသိဖာသာပဲ။ သူလည်းသူ့ဟာသူ။ ကိုယ်လည်း အဖုတ်ကြားတောင် ညှပ်ထားမဟုတ်ဘူး။ နောက်ကျမှ ဘာထဖြစ်လဲဆိုတော့ အိမ်မှာနေ့ခင်း နေ့လယ်လာပြီး အဝတ်လျှော် မီးပူတိုက် လုပ်တဲ့ကလေးမက ရော့ အန်တီလတ်ကြည့်ဖို့ဆိုပြီး ကိုရီးယားကားတွေ တစ်ထပ်ကြီး ပေးသွားတာ။ သူကြည့်ပြီးပြီ ကောင်းတယ်တဲ့။ အဲဒါနဲ့ ညဘက်တွေ ဆေးခန်းက ပြန်လာတော့ စကားပြောဖော်၊ ရန်ဖြစ်ဖော် မင်းစိုးကလည်း မရှိတာနဲ့ အဲ့ကားတွေကြည့်ရင်းနဲ့ ခိုင်ခိုင်လတ်တစ်ယောက် ထန်တာ ထန်တာလေ၊ အရည်ကို တောက်တောက် တောက်တောက်နဲ့ကျတယ်။ အမယ်လေး ငါ ဂုဏ်သရေရှိ ဒေါက်တာမကြီးဖြစ်ပြီး ဒီကနွဲ့ကလျ ကိုရီးယားမင်းသားလေးတွေကျမှ ဒီလောက်ဖြစ်ရလားလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကျိန်ဆဲလည်း မရပါဘူး။
ကိုနိုင့်လီးကြီးနဲ့တုန်းက ကြမ်းတာတွေ၊ ကိုနိုင့်ဗလကြီးတွေနဲ့တုန်းကတောင် ဒီလောက် မထန်ခဲ့ဖူးဘူး။ အဲဒါနဲ့ပဲ အရင်က ဖာသိဖာသာနေမိတဲ့ ဖိုးချစ်လေးက မျက်စိရှေ့မှာတင် အရွယ်ရောက်ပြီး ခုနက ကိုရီးယားမင်းသား ကနွဲ့ကလျလေးနဲ့ တူလာပါလေရော။ အမယ်လေးဟဲ့ ဖိုးချစ်ရဲ့၊ ငါ့မျက်စိရှေ့တင် လေးဘက်ထောက်သွားနေတဲ့ ကလေးလေးက ငါ့ကို အရည်စက်လက်ဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်သတဲ့လား။ ဖိုးချစ်ကို မြင်တာနဲ့ တကိုယ်လုံး ထူပူ ရေတွေငတ်၊ ရင်တွေတုန်၊ ကောင်လေး ပေါင်ကြားထဲပြေးဝင်ပြီး လီးကြီးရော ဥတွေရော ပြေးစုပ် လျက်ချင်လိုက်တာ၊ သူ့ဂွကြားကို ခိုင်ခိုင်လတ်ဖင်ဆုံကြီးနဲ့ ပွတ်ပြီး အယားဖြေချင်လိုက်တာ လွန်ရော။ အဲဒါနဲ့ပဲ ခိုင်ခိုင်လတ်တို့ ဒီအရွယ်ကြီးကျမှ ကိုယ့်တူ ကိုယ့်သားလောက်လေးကို ကြံရတော့တာပဲ။ အစ်မသာ ရှိသေးရင် ဆဲလိုက်မယ့်ဖြစ်ချင်း။ မိဘတွေကရော အစ်မတို့လင်မယားကရော ခိုင်ခိုင်လတ်တို့ တူဝရီးအတွက် အမွေတွေ တပုံကြီးထားခဲ့လို့ တစ်သက်စားမကုန်ပါဘူး။ တူဝရီး ၂ယောက် အကြိုက်သုံးလို့ ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခိုင်ခိုင်လတ်က ဘယ်တော့မှ လိုတာထက် ပိုမသုံးခဲ့ဘူး။ မင်းစိုးကလည်း ဒီအသက်အရွယ်အထိ သူ့ကိုပေးထားတဲ့ မုန့်ဖိုးထက်ပိုပြီး ဘယ်တုန်းကမှ မတောင်းခဲ့ဘူး၊ ဒီကောင် ဒီတစ်ချက်တော့ ချီးကျူးရမယ်။ ခုတော့ တူဝရီးနှစ်ယောက်အသုံးအစွဲ ညီလာရာက ခိုင်ခိုင်လတ်က စပြီး သစ္စာဖောက်ရတော့တယ်။ ဖိုးချစ်လေး အိမ်လာရင် နာရီ၊ ရေမွှေး၊ ခါးပတ်၊ အားဆေး အကုန် ရရင် ရသလို ပေးနေတာ။ ကောင်လေးကတော့ အကြောက်အကန်ငြင်းတယ်။ ခိုင်ခိုင်လတ်က ခိုးပြီးပေးပေမယ့် မင်းစိုးက ရိပ်မိပုံပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အံ့ဩဖို့ ကောင်းတာက ဘာမှမပြောတာပဲ။ တခြားကိစ္စဆို မောင်မင်းစိုးတို့ အဒေါ်ရင်းခေါက်ခေါက်ကို နပမ်းသတ်လုံးရလည်း လုံးမယ့် အထာမျိုး။ ခုကျ ငြိမ်နေတယ်။
မသင်္ကာလို့ သွားကြည့်မှ ဘယ်ဟုတ်မလဲ။ ဖိုးချစ်က ပေးသမျှတွေ တခုမှ မယူဘူး။ မင်းစိုးဆီ ပြန်ပေးခဲ့တာချည်းပဲ။ ဒီတော့ မောင်မင်းကြီးသားက အဲဒီပစ္စည်းတွေနဲ့ သာယာနေတာပေါ့။ သေနာကောင်လေး။ ငါကျွေးတဲ့ အားဆေးတွေစားပြီး အကောင်ကြီးက တုတ်ခဲနေတာ။ ဒါပေမယ့် ပေါ်သွားမှာစိုးလို့ ဘာမှတော့ ပြဿနာမရှာဘူး။ ဒင်းကိုတော့ စိတ်ထဲ တော်တော်လေး အခဲမကြေဘူး။ ဒါနဲ့ ကြာတော့ မြင်ရတာတောင် အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီး ရှောင်နေတာ။ သူကလည်း ဖာသိဖာသာပဲ။ အဲလိုနဲ့ အဒေါ်နဲ့ တူဝရီး နည်းနည်းစိမ်းသလို ဖြစ်နေရာက ဒီနေ့ကျမှ ဘာစိတ်ကူးပေါက်လဲ မသိ တီလတ် ဘာချက်လဲဘာညာနဲ့ လာရောနေတာ။ ဖိုးချစ်ကိုလည်း ခေါ်လာတယ်ဆိုတော့ မျောက်ပြဆန်တောင်းဦးမလို့ပဲ နေမှာပေါ့။ အယ် ဟုတ်ပါဘူး။ အဲလိုဆို ငါ့ဖိုးချစ်လေး မျောက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့။ သေနာကောင် မင်းစိုး။ ဒင်းကို ဖိုးချစ်လေး စာရှင်းပြနေတာ ဘယ်လောက်တောင် ကြာသွားပြီလဲ မသိ ခိုင်ခိုင်လတ်တစ်ယောက် ဧည့်ခန်းထဲမှာ ထိုင်ရင်း စာဖတ်သလိုလိုနဲ့ ထိုင်စောင့်နေတာ တော်တော် ကြာသွားပြီ။ စောင့်ရင်း စောင့်ရင်း တချက်မှေးခနဲ ဖြစ်သွားတာ ဘေးကနေ “တီလတ်.. တီလတ်” ဆိုတဲ့ အသံတိုးတိုးလေး ကြားမှပဲ ပြန်သတိဝင်လာတယ်။ “ဩော် ဖိုးချစ်လေး ပြီးပြီလား၊ အေးကွာ၊ တီလတ်လည်း အိပ်ရေးပျက်တာများတော့ ခေါင်းတွေကနောက်.. အဲမှာ မှေးကနဲ ဖြစ်သွားတာပဲ” “အိပ်လိုက်ပါလား တီလတ်ရဲ့ ရှစ်နာရီလည်း ထိုးနေပြီ ကိုမင်းစိုးတောင် အိပ်သွားပြီ” “အို ပြောမနေနဲ့ အဲ့ကာလနဂါးကတော့” သူရယ်သံလွင်လွင်လေးပေါ်လာတယ်။ “ဖိုးချစ်လေး .. တီလတ်ခေါင်းနောက်နေလို့ကွာ၊ အပေါ်ထပ်တက်ရမှာလေ နည်းနည်း…” “သား လိုက်ပို့ပေးမယ်လေ အန်တီလတ်ရဲ့” ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ လက်မောင်း ချိုင်းကြားအောက်နေ သူ့ခေါင်းကို လျှိုဝင်လိုက်ပြီးတော့ တွဲခေါ်သွားတယ်။ နူးညံလိုက်တာ အထိအတွေ့က။ အိပ်ခန်းထဲလည်းရောက်ရော ခိုင်ခိုင်လတ်တို့မြန်တယ်။
လက်က တံခါးချက်ကို ချပြီးသားပဲ။ အမေတို့ အဖေတို့ အမြော်အမြင်ကြီးကြီးနဲ့ ဆောက်ခဲ့တော့ အပေါ်ထပ်အခန်းတွေက အသံလုံတယ်။ လျှောက်ခုန်နေရင်တောင် အသံ က အောက်ကို သိပ်မရောက်ဘူး။ ခုတင်နားလည်း ရောက်ရော မူးသလို မော်သလိုနဲ့ ခုတင်ပေါ်တွန်းချလိုက်တယ်။ မရတော့ဘူး၊ ဒီနေ့အပိုင်ကြံမှ။ နို့မိုဆို အမ်းရတဲ့ ပစ္စည်းတွေက မင်းစိုးဆီရောက်တာနဲ့တင် သူ့ထိုင်အမ်းနေရသလို ဖြစ်နေမယ်။ ကောင်လေးက လဲသွားတော့ ခိုင်ခိုင်လတ်က သူ့အပေါ် ဖိလှဲချလိုက်တယ်။ သူ့ဂွကြားနဲ့ ကိုယ့်ဂွကြား ကွက်တိ။ ခိုင်ခိုင်လတ်က နဂိုတည်းက အကြံနဲ့ ဆိုတော့ ဘရာ ပင်တီ ဘာမှ မဝတ်ထား။ အထဲမှာ မိမွေးတိုင်းပဲ။ အင်္ကျီနဲ့ ထဘီကလည်း အပျော့သားကိုမှ တော်တော်ပါးတာ။ အလုံး အဖု အထစ်ကြီးတွေက သေချာမကြည့်ရင်တောင် ဒီတိုင်းကြီး ထင်းနေတာ။ ဖိုးချစ်လေးက အိမ်နေရင်း ဘောင်းဘီတိုအပါးလေးနဲ့။ သူ့ဂွကြားက ခိုင်ခိုင်လတ်က သူ့အဖုတ်ကြီးနဲ့ ပွတ်တယ်။ ထဘီနဲ့ ဘောင်းဘီ ခံနေပေမယ့် အသိသာကြီးလေ။ သူ့လီးကြီးကို ပွတ်မိတာပေါ့။ ဟယ် ဒါပေမယ့် အံ့ဩစရာ ဖိုးချစ်လီးက လုံးဝ တောင်မလာဘူးတော့။ မာဆတ်ဆတ်လေးတောင် ဖြစ်မလာဘူး။ တခုခုတော့ လွဲနေပြီ၊ ပြီးတော့ ဖိုးချစ် အသက်ရှူသံတွေ မြန်နေတယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်လှုပ်ရှားလို့ထက် ကြောက်လို့ မြန်တဲ့ ပုံစံကြီး။ ခိုင်ခိုင်လတ် ကိုယ်လုံးကြီးနဲ့ အဲလိုပွတ်တာ ခံရရင် တော်ရုံ ယောကျာ်းလေးကတော့ နေရာမှာတင် သုတ်နှစ်ခါလောက် ထွက်သွားမယ်။ ဒီကောင်လေးကတော့ ဒီအတိုင်းပဲ ဘာမှထူးမလာဘူး။ ဒါနဲ့ ဒီအခြေအနေရောက်မှတော့ မထူးပါဘူး ကိုယ်ကပဲ စလိုက်မယ်ဆိုပြီး နှင်းဆီရောင် နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးနဲ့ သူ့နှုတ်ခမ်းလေးတွေကို နမ်းမယ်အလုပ်မှာ “တီလတ် ဘာလုပ်တာလဲ… ဖယ်.. ဖယ်” ဆိုပြီး ခိုင်ခိုင်လတ်ကိုယ်လုံးကြီးကို သူ့ကိုယ်လုံး ကနွဲ့ကလျလေးနဲ့ တွန်းဖယ်ပစ်လိုက်တယ်။
ပြီးတော့ ချက်ချင်း တံခါးဆီပြေးသွားပြီး ကယောင်ကတမ်းနဲ့ ဖွင့်နေပေမယ့် လက်ကချော်နေတော့ တံခါးက မပွင့်ဘူး။ ခိုင်ခိုင်လတ် ဒေါသထွက်သွားပြီ။ သူဖင်သရမ်းတာမှန်တယ်၊ ဒါပေမယ့် နွှဲခဲ့တဲ့ ပွဲတိုင်းမှာ ခိုင်ခိုင်လတ်ဘက်က စခဲ့ရတယ်ဆိုတာ တစ်ခါမှ မရှိဘူး။ ယောကျာ်းတွေကိုယ်တိုင်က လိုချင် ခယပြီး လာတောင်းယူရတာချည်းပဲ။ နောက်ဆုံး အရှက်ကြီးတဲ့ ကိုဝင်းအောင်ကြီးတောင် သူ့ခြေသလုံးသားဝင်းဝင်းလေး လှစ်ပြလိုက်တာနဲ့ အရူးအမဲသားကျွေးသလို ဖြစ်သွားတာ။ ခုဟာက လွန်လွန်းပြီ။ “ဟေ့ ဖိုးချစ်” ခိုင်ခိုင်လတ် အသံက ပီသတယ်၊ ဟိန်းတယ်။ ဝါ့ဒ်ထဲမှာတုန်းက ဂျူနီယာတွေကို ဟောက်တဲ့ အသံမျိုး။ ဖိုးချစ် တန့်သွားတယ်။ “မင်းက မလွန်လွန်းဘူးလား။ ငါမိန်းမတန်မဲ့နဲ့ ငါ့ဘက်က စရတာကိုတောင် သရဲသဘက်တွေ့သလို အတင်းထွက်ပြေးတယ်။ ငါက ရွံစရာကောင်းနေလို့လား။ ဘာ ချွတ်ယွင်းချက် ရှိနေလဲ။ မင်းအမေအရွယ်မို့လို့လား။ ပြောစမ်း ဖိုးချစ်” ခိုင်ခိုင်လတ် အသံကို အသားကုန်မြင့်အော်ပြောတယ်။ အသားတွေ တဆတ်ဆတ်တုန်နေတယ်။ ဖိုးချစ်က တုန်တုန်ရင်ရင်နဲ “တီ..တီလတ်မှာ ချွတ်ယွင်းချက် မရှိပါဘူး။ တီလတ်က ကျနော် တွေ့ဖူးသမျှထဲမှာ ကျက်သရေအရှိဆုံး၊ အလှဆုံး မိန်းမပါ။ ဒါပေမယ့် ကျနော်က…” “ဘာဖြစ်လဲ မင်းက” “ကျနော်က ကိုမင်းစိုးကို……” စကားမဆုံးခင် ဂျောက်ခနဲ တံခါးပွင့်သွားတော့ ဖိုးချစ် ဆင်းပြေးသွားတယ်။ ခိုင်ခိုင်လတ်တော့ နေရာမှာတင် ပုံရက်သား လဲကျသွားတယ်။ လောကကြီး တစ်ခုလုံး ချာချာလည်နေပြီ။ သူ့နားထဲမှာ ဖိုးချစ်ရဲ့ အသံက ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်နေတယ်။ “ကျနော်က ကိုမင်းစိုးကို……” “ကျနော်က ကိုမင်းစိုးကို……” “ကျနော်က ကိုမင်းစိုးကို……” “ကျနော်က ကိုမင်းစိုးကို……” အား ခိုင်ခိုင်လတ် ငိုချလိုက်တယ်။
ငါ့အဖြစ်က ရှက်စရာကောင်းလိုက်တာ။ အခြောက်ကိုမှ ကြံမိတယ်။ ငါ့သိက္ခာတွေ အကုန် အကျခံပြီးတော့ကို မြုဆွယ်ခဲ့တာ။ ခုအဲဒီအခြောက်သာ နုတ်မလုံဘဲ ဖွရင် ဒီမြို့မှာ ငါ့သိက္ခာတော့ သွားပါပြီ။ အီး …အစ်မရေ .. ညီမလေးအဖြစ်ကို ကြည့်လှည့်ပါဦး။ အဲဒီအခြောက်လေးက အစ်မသားကို … အစ်မသားကို…. ဟုတ်တယ်။ ဒီကိစ္စတွေအားလုံး မင်းစိုးကြောင့်ဖြစ်တာ။ ဒင်းကြောင့်ဖြစ်တာ။ ဒင်းသာ အဲဒီအခြောက်နဲ့ မပတ်သက်ရင်…ငါ ခုလိုဖြစ်စရာမရှိဘူး။ သတ်မယ်.. ဒင်းကို.. ငါသတ်မယ်။ မင်းစိုး.. နင်သေဖို့သာ ပြင်ထား။ ခိုင်ခိုင်လတ် မိန်းမကြမ်းကြီးတစ်ယောက်လို အိမ်ပေါ်က တဒုန်းဒုန်းနဲ့ ပြေးဆင်းလာတယ်။ မင်းစိုး အခန်းနားရောက်တော့ ခလူး ခလောနဲ့ ဟောက်သံလေးများတောင် ကြားရသေး။ သတောင်းစား… ဒင်းက ဇိမ်လေးနဲ့ ဟောက်တောင်ဟောက်နေတယ်။ ငါကတော့ ခွေးလုံးလုံး ဖြစ်သွားပြီ။ ဒင်းတော့လား တွေ့မယ်။ မင်းစိုးအခန်းတံခါးက ဘယ်တော့မှ ပိတ်မထားဘူး။ စေ့ရုံစေ့ထားတာ။ ခိုင်ခိုင်လတ်ကလည်း ဝင်လေ့မရှိဘူး။ မင်းစိုးလည်း ခိုင်ခိုင်လတ်အခန်းကို တစ်နှစ်နေလို့ တစ်ခါမရောက်ဘူး။ အခန်းထဲမှာ မီးပိတ်ထားတော့ တရုတ်ကပ်က လရောင်လေးပဲ ဖြာကျနေတယ်။ ခြင်ထောင်ထဲမှာတော့ မင်းစိုးက ခဘူး ခလောနဲ့။ ခိုင်ခိုင်လတ် ဒေါသပိုထွက်သွားတယ်။ သေနာကျလေး သေအောင်သတ်ပစ်မယ်။ ခြင်ထောင်ကို ဗြုန်းဆို ဆွဲမလိုက်တော့ “ဟယ်”. ခိုင်ခိုင်လတ် ကြက်သေသေသွားရပြီ။ လရောင်အောက်မှာ မင်းစိုးရဲ့ လီးကြီးက ထောင်တန်းနေတာပဲ။ အကြောတွေက အပြိုင်းပြိုင်းထလို့။ ကြီးတာကလည်း သူ့ဘဲတွေထဲမှာ အကြီးဆုံး ကိုနိုင်ကြီးလီးထက်တောင် ကြီးသေးတယ်။ လုံးပတ်ကြီးက တုတ်ခဲနေတာပဲ။ ထိပ်ဖူးကြီးက နီရဲပြောင်လက်လို့၊ ဥနှစ်လုံးကလည်း နေရာတကျ။ အမွှေးတွေက မည်းလိမ်ကောက်လို့။ ခိုင်ခိုင်လတ် အပြင်မှာ တွေ့ဖူးသမျှ လီးတွေထဲမှာ အရိုင်းဆန်ဆုံးနဲ့ အလှဆုံး လီးကြီးပဲ။
ဒီကောင်လေး ဆေးတွေဘာတွေများ လျှောက်ထိုးထားသလားလို့ တွေးနေတုန်း ကိုယ်ထဲက သွေးတွေ ပွက်ပွက်ဆူလာတယ်။ မင်းစိုးကို သတ်ချင်တဲ့ ဒေါသသွေးတွေတော့ မဟုတ်ဘူး။ မင်းစိုး လီးကြီးကို ကိုင်တွယ်ပွတ်သပ်ချင်တဲ့ ကာမသွေး၊ တဏှာသွေး၊ ရမ္မက်သွေးတွေ။ စိတ်က ကိုင်ကြည့်ချင်တယ်လို့ပဲ ရှိသေး ကိုယ်က ထိုင်ချလိုက်ပြီး၊ မင်းစိုးလီးကြီးကို ဖယောင်းလက်ချောင်း သွယ်သွယ်လေးတွေနဲ့ ဆုပ်မိသွားပြီ။ ထိပ်ဖူးကြီးကို သေချာမြင်ရအောင် အရေခွံကို အောက်ဆွဲချလိုက်တော့ လီးနံ့ ညှီစို့စို့ကြီးက ထောင်းခနဲ တက်လာတယ်။ မင်းစိုးက ဒီရက်ပိုင်း အေးတယ်ဆိုပြီး ရေမချိုးဘဲ နေတာ ၂ရက်ရှိပြီ၊ ခိုင်ခိုင်လတ်တောင် ဆူလိုက်သေးတယ်။ ခုလည်း လီးကို သန့်ရှင်းရေး မလုပ်ထားလို့ ထင်တယ်။ လီနံ့ကြီးက နှာခေါင်းထဲ မွှန်သွားတယ်၊ ဒါပေမယ့် အဲ့လီးနံ့ ညှီစို့စို့ကြီးက ခိုင်ခိုင်လတ်အတွက်တော့ နတ်သုဒ္ဓါရဲ့ အနံ့ပဲ။ ဒီအနံ့ကြီးက ကိုယ်တွင်းက အကြောပေါင်းတစ်ထောင်ကို နိုးကြားလာစေတယ်။ ခိုင်ခိုင်လတ် ရေငတ်လာပြီ။ အာခေါင်တွေခြောက်။ ကိုယ်တွေပူ။ တုန်တုန်ယင်ယင် ဖြစ်လာလို့ လီးကြီးကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ အထက်အောက် ပွတ်တိုက်ပေးပြီး နှင်းဆီဖူးရောင် နှုတ်ခမ်းလေးကို အဝိုင်းပုံဖြစ်အောင် ဟ၊ စတော်ဘယ်ရီရောင် ခံတွင်းလေးထဲ အုခနဲ ငုံချလိုက်တယ်၊ အစက စုပ်ရုံ စုပ်ပေးမလို့။ လောဘကြီးပြီး ငုံလိုက်တာ လည်ချောင်းထဲထိ ရောက်သွားပြီး ဒိသရုတ်ဖြစ်သွားတယ်၊ အွတ်ခနဲ ပြန်ဆွဲထုတ်လိုက်တော့ လီးကြီးမှာ ခိုင်ခိုင်လတ် သွားရည်တွေ တံတွေးတွေ ရွှဲပြီး ချွဲပြစ်နေတယ်။ ခိုင်ခိုင်လတ်လည်း လီးကြီးကို တစ်ချက် နှစ်ချက် လက်နဲ့တိုက်ပြီး မင်းစိုးပေါ် တက်ခွလိုက်တယ်။ ခုနတည်းက ဘာမှ ဝတ်မထားတော့ လီးကြီးရဲ့ အေးစက်ပူနွေးတဲ့ အထိအတွေ့က အဖုတ်ကို ကျင်ခနဲ လာထိတယ်။
ထိပ်ဖူးကြီးကို အဖုတ်ဝမှာတေ့ပြီး “သား.. မင်းစိုး… တီလတ်ကို.. ခွင့်လွှတ်ပါ. တီလတ် အရမ်းထန်နေလို့ပါ သားရယ်”. ဆိုပြီး ရှိုက်သံတဝက်နဲ့ တိုးတိုးလေးပြောလိုက်ရင်း ထိုင်ချလိုက်တာ ဒုတ်ခနဲ သားအိမ်ကို သွားဆောင့်တယ်။ “အား… ကောင်းလိုက်တာ..သားရယ်.တီလတ်ဖြင့် ဦးနိုင်နဲ့ ပြီးတည်းက ဒီလောက် စီးစီးပိုင်ပိုင်ရှိတဲ့ အရသာ မခံစားရတာ ကြာပြီ…” “သား… မင်းစိုး… တီလတ်… လိုးပြီနော်… သားကို ..လိုးပြီ” ခိုင်ခိုင်လတ် ကောင်းလွန်းတော့ ပါးစပ်က ကယောင်ကတမ်းတွေပြောပြီး လီးကြီးအပေါ်က နေ တဒုတ်ဒုတ်နဲ့ ဆောင့်ချနေတယ်။ မင်းစိုး ဆီးစပ်နဲ့ ခိုင်ခိုင်လတ် ဖင်ကြီး ရိုက်ခတ်သံကလည်း တဖုန်းဖုန်းနဲ့။ အဲ့လောက်လုပ်နေမှတော့ မောင်မင်းစိုးလည်း ဘာသားနဲ့ ထုထားတာမှတ်လို့။ နိုးပြီပေါ့ဗျာ။ မနိုးဘဲနေရအောင် ဂျပန်ကားမှ မဟုတ်တာ။ မင်းစိုးကလည်း အိပ်မက်ထဲမှာ ဥစ္စာစောင့်မ သူ့ကို အမှန်အကန် ကျုံးနေတယ်လို့မက်တာ။ နိုးလာတော့ ဆံပင်ရှည်ရှည် အဝါဝမ်းဆက်နဲ့ မိန်းမက သူ့ပေါ်တက်ပြီး အားရပါးရ ဆောင့်နေတာတွေ့တယ်။ လရောင်ပဲရှိတော့ မျက်နှာကို သေချာမမြင်ရဘူး။ အိပ်ချင်မူးတူးနဲ့ဆိုတော့ ဥစ္စာစောင့်မထင်ပြီး အဲ့မိန်းမဖင်ကို လက်ကြီးနဲ့ ပယ်ပယ်နယ်နယ် ကိုင်ပြီး အောက်က ပင့်ဆောင့်ပေးနေလိုက်တယ်။ ၃ချက်လောက်ကျ အားမရတော့ ဖင်ကနေကိုင်ပြီး လီးလည်း အဖုတ်ထဲက ကျွတ်မသွားအောင်ထိန်းရင်း ဥစ္စာစောင့်မကို လှဲသိပ်လိုက်တယ်။ အဲ့ကျမှ သူ့အောက်က မျက်နှာက ထင်းခနဲ။ “ဟာ…. တီလတ်” မင်းစိုး ခေါင်းနပန်းကြီးသွားတယ်။ တီလတ်က သူ့ကို ဒီရက်ပိုင်း ဟိုပစ္စည်းတွေကိစ္စနဲ့ စိတ်ကောက်နေတာ၊ သိပ်ကြည်တာမဟုတ်ဘူး။ ခုကျ သူ့အပေါ် တက်ဆောင့်နေပါလား။ “တီလတ် လုပ်မနေနဲ့ မင်းစိုး.. ဆောင့်စမ်း..” “တီ … တီလတ်” မင်းစိုး ထစ်ငေါ့ ထစ်ငေါ့ ဖြစ်နေတာကို ခိုင်ခိုင်လတ် စိတ်မရှည်လို့ ခြေထောက်နှစ်ဖက်နဲ့ မင်းစိုး တင်ပါးကို ညှပ်ပြီး သူအောက်က ကော့ဆောင့်ပေးလိုက်တယ်။ အဲ့ကျမှ မင်းစိုးလည်း အယောင်ကန်ကန်းနဲ့ ခါးလှုပ်ပြီး အသားကုန်ကျုံးဆောင့်တော့တယ်။ “အား မင်းစိုး.. ဆောင့်. ဟုတ်တယ်… အဲလိုလေး… နာနာဆောင့်” တီလတ် အရင်ကနဲ့ တခြားစီပဲ ပွင့်လင်းလှချည်လားလို့ မင်းစိုး တွေးနေတယ်။ တွေးရင်း ဆောင့်တာလည်း ရပ်မသွားဘူး။
မင်းစိုးလီးကြီးက တဘွတ်ဘွတ်နဲ့ တီလတ်အဖုတ်ထဲ ဝင်နေတယ်။ “မင်းစိုး… ငါ့ကိုလိုး…ငါ့ကို သေအောင်လိုး.. နင့်အဒေါ်ရင်းခေါက်ခေါက် ငါ့ကို အဖုတ်ကြီးပြဲသွားအောင်လိုး.. ငါ နင့်လီးကြီးကို ကြိုက်တယ်ဟာ.. ငါ့အဖုတ်ကြီးကို လိုးဟာ” တီလတ် ခေါင်းကို ဘယ်ညာရမ်းခါပြီး စကားလုံး အကြမ်းကြီးတွေ ပြောနေတော့ မင်းစိုး ဖီးလ်တော်တော်ရှိလာတယ်။ သူလည်း ဒီအရွယ်ရောက်နေပြီ စော်တော့ လိုးဖူးတာပေါ့။ ဒါပေမယ့်အခုဟာက ကိုယ်တစ်သက်လုံး ချစ်ကြောက်ရိုသေလာတဲ့ တီလတ်။ အဒေါ်ရင်းခေါက်ခေါက်။ စိတ်ထဲမှာ အဒေါ်ဆိုတာထက် အမေလို့တောင် သတ်မှတ်ထားတာ။ အဲလိုမိန်းမကို ပြန်လိုးနေရတယ်ဆိုတဲ့ ဖီလင်က လည်းဖြစ်သလို pleasure လည်း အကြီးအကျယ်ရစေတယ်။ “တီလတ်..” “ဘာလဲ” “ဒေါ့ဂီဆွဲကြမလား” မင်းစိုး အရဲစမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ “အေး ကောင်းသားပဲ၊ ဒေါ့ဂီဆို နောက်ကနေ ဆောင့်လို့ရတယ်” ဒီတခေါက်လည်း လီးမကျွတ်အောင် ဂရုတစိုက်လှည့်လိုက်ကြပြီးတော့ တီလတ်က ဖင်ဘူးတောင်းထောင်လို့ မွေ့ရာကို မျက်နှာအပ် လက်ထောက်၊ မင်းစိုးက တီလတ်ဖင်ကြီးကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ကိုင်ပြီး ပယ်ပယ်နယ်နယ် ဆောင့်နေတာ။ “အာား မင်းစိုး. ကောင်းတယ်… အဲ့လိုဆောင့်… နာနာလိုး. အရမ်းကောင်းတယ်… အဖုတ်တော့ ပြဲပါပြီ. လိုးစမ်း.. လိုးရင်းနဲ့ ရိုက်.. တီလတ်ဖင်ကို ရိုက်… သား အားရှိပါးရှိ ရိုက်.. သားငယ်ငယ်က တီလတ် ခဏခဏရိုက်ဆုံးမဖူးတယ်လေ.. အဲဒါကို လက်စားချေတယ်လို့ သဘောထားပြီး ရိုက်” မင်းစိုးလည်း အမိန့်လိုက်နာတဲ့ အနေနဲ့ ဖျန်းခနဲ ရိုက်ချလိုက်တယ်။ နို့နှစ်ရောင် ဖင်တုံးကြီးမှာ လက်ဝါးရာကြီး နီထင်းသွားတယ်။ “ဖျန်း ” “ဖျန်း” “ဖျန်း” မင်းစိုး ဆက်တိုက်ရိုက်ချလိုက်တယ်။
“တီလတ်” “ဟင်.. သား” ” သားလိုးတာ ကောင်းလား” “အရမ်းကောင်းတယ်” “ရိုက်တာရော” “အင်း အသေကြိုက်တယ်” “တီလတ်ကို သားနေ့တိုင်း ဒီလိုလိုးမှာနော်” “အင်း သားဆန္ဒရှိတဲ့အချိန် တီလတ်ထဘီကို လှန်ပြီး ကြိုက်သလိုသာ လိုးတော့ သားရယ်.. အရမ်းကောင်းတာပဲ” “တီလတ် သားဂေါ်လီထည့်ရင်ရော ခံမှာလား” “ဘာထည့်ထည့်ကွာ… ငါ့သားလိုးရင် တီလတ်ခံဖို့ အသင့်ပဲ” “ဟုတ်ပြီ” မင်းစိုးက မပြောမဆိုနဲ့ လီးကြီးကို ဘွတ်ခနဲ ခိုင်ခိုင်လတ် အဖုတ်ထဲက ထုတ်လိုက်တယ်။ ခိုင်ခိုင်လတ်က ဘာလုပ်တာလဲလို့ အော်မလို့ ပါးစပ်ဟတုန်းရှိသေး ဟထားတဲ့ ပါးစပ်လေး ပြဲသွားတယ်။ “ဇွိ… ဗြိ…” မင်းစိုးက လီးကြီးကို ခိုင်ခိုင်လတ် ဖင်စအိုဝထဲ ဗြွတ်ဆို ထိုးထည့် လိုက်တာကိုး။ အဲ့လောက်ကြီးတဲ့ လီးကြီးကို ဖင်ကို အလိုးခံရတော့ ခိုင်ခိုင်လတ် ထွန့်ထွန့်လူးနေတယ်။ “အစ်မရေ… ညီမလေးကို ခွင့်လွှတ်ပါတော့. အစ်မသား…ညီမလေးလည်း သားလိုချစ်ရတဲ့ မင်းစိုးက ဖင်လိုးပေးတာကို ညီမလေး အသေအလဲကြိုက်နေပြီ အစ်မရေ” တီလတ် အဲ့လို အော်တဲ့အသံကြားတော့ မင်းစိုးလည်း အတွင်းသားတွေ စုတ်ပြဲမှာ ဘာညာမတွေးတော့ဘူး ကျားတစ်ကောင်လို အရှိန်အဟုန်နဲ့ ဆောင့်လိုက်တာ “အ .. အ တီလတ် သားပြီးတော့မယ်” “တီ… တီလတ်လည်း.. ပြီးတော့မယ်.. တီလတ်က ဖင်ရော အဖုတ်ရော နှစ်ခုလုံး… တ.. တပြိုင်တည်း.. ပြီး… ပြီး… အား.. မင်းစိုး… မင်းစိုး… သား… ချစ်တယ်ကွာ… အဒေါ်အရင်းကို ဖင်ရောအဖုတ်ပါလိုးပေး.တယ်…. ချစ်… ချစ်တယ်ကွာ..မင်းစိုး.. အား.. တီလတ်ပြီးပြီ.. မင်းစိုး …” တီလတ်ကယောင်ကတမ်းတွေ ပြောပြီး ဖင်ရော အဖုတ်ရော စူပွစူပွလုပ်ပြီး ထွန့်ထွန့်လူးသွားတယ်။ မင်းစိုးလည်း ပြီးသွားလိူ့ တီလတ်ရဲ့ မှောက်ရက် ကိုယ်ပေါ် လိုက်မှောက်ချလိုက်ပြီး လီးကြီးကို ဖင်ထဲ စိမ်ထားရင်း အမောဖြေလိုက်တယ်။ တီလတ်က မျော့နေတဲ့ကြားက ဖျော့တော့တဲ့ လေသံလေးနဲ့ “သား ..မင်းစိုး… သားကို တီလတ် တသက်လုံး မွေးလာတာ.. ဒီညတစ်ညတည်းနဲ့ကို တန်ပါတယ်ကွာ” ပြီးပါပြီ။
ဝိုင် ချိူ တစ်ခွက်လို ရစ်မူး